Teknụzụ na ahịa
Saturday, December 26, 2009 Fraịdee, June 9, 2017 Douglas Karr
Bọọlụ bọọlụ America na-emechi
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anabata teknụzụ ma a bịa na atụmatụ azụmaahịa ha. Mgbe ole Pepsi wepụtara na Super Bowl, ndị odeakụkọ ọdịnala kpọrọ ya ịgba chaa chaa.
Ọ bụghị mgbasa ozi na Super Bowl bụ ịgba chaa chaa? N'ezie?
Mgbasa mgbasa ozi Super Bowl na-efu $ 3 nde kwa sekọnd 30. Pepsi zubere abụọ 30 secoond mgbasa ozi na a 60 abụọ ad… nke ahụ bụ $ 12 nde. Ọnụ ego ahụ rịrị elu karịa 10% n'etiti 2008 na 2009. Ka anyị mee mgbakọ na mwepụ. Nke ahụ bụ $ 12 nde iji ruo nde mmadụ 98 na-ekiri ya .. ma ọ bụ ihe dịka $ 0.12 kwa onye na-ekiri ya.
Ka anyị ghara ichefu na Uru Pepsi dara bụ pasent 43 mgbe ha n'ezie mere kwụọ ụgwọ maka mgbasa ozi Super Bowl. Hmmm, ọ dị ka mgbasa ozi Super Bowl akwụghị ụgwọ.
Nke a anaghị agụnye, n'ezie, ezigbo ịgba chaa chaaIwere ụlọ ọrụ ga-eweta azụmaahịa ga-ebugharị tọn okporo ụzọ ka ika gi. Ka anyị mee ka ọ bụrụ nke ọ bụla soda nwere uru $ 0.10… nke ahụ pụtara na mgbasa ozi Pepsi ga-eme ka onye ọ bụla n'ime ndị na-ekiri ha zụta opekata mpe Pepsi (ihe karịrị 100 nde sodas) naanị iji kpuchie ụgwọ nke mgbasa ozi ahụ.
Nke ahụ emeghị, ọ gaghịkwa aga.
Kama nke ahụ, site na ịnabata usoro mgbasa ozi dijitalụ, Pepsi nwere ike itinye ego na teknụzụ nje ma ọ bụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na obere ego yaonye ọ bụla otu ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekiri. N'ezie ọ gaghị eme na otu ihe omume gafee 2 nkeji… ma onye na ha ziri ezi uche ga-achọ ya? Pepsi chọrọ atụmatụ dị ogologo oge na ụfọdụ ngwaahịa dị ukwuu iji weghachite ya.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na Pepsi kwadoro asọmpi 'mgbasa ozi kachasị mma' ebe onye mmeri meriri $ 1? Na $ 1 nde ọzọ na onyinye ndị ọzọ? Ikekwe ha kwalitere asọmpi ahụ n'ofe Youtube, Twitter na Facebook site na itinyekwu ego nke $ 1 nde.
Kedu usoro ị chere ga-esi abawanye… yana ndị na-ege ntị na ozi dị mkpa karị? Teknụzụ na azụmaahịa na-esonye na ibe ha yana oge ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ meghere anya ha maka ohere dị ịtụnanya dị.
Naanị ihe edeturu: Adịghị m, n'ụzọ ọ bụla, na-arụ ụka ma Super Bowl Ads na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị. GoDaddy enweela nnukwu ihe ịga nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ iji nweta òkè ahịa ndebanye aha na ya ụfọdụ mkpọsa mkpọtụ. Nke a bụ naanị ezigbo ihe atụ mgbe ọ naghị arụ ọrụ na ohere iji nweghachi ịlaghachi na itinye ego na mgbasa ozi dijitalụ.
Ọzọ dee: Echere m na Pepsi kwesịrị okporo mmiri ọhụrụ logo dị ka nke ọma. Ọ dara ogbi.
Tags: mgbasa oziazụmahịapepsisuper nnukwu efere
Mgbe ụfọdụ Mkpọpụta Ahịa na-emepụta Daimọnd
Disemba 26, 2009 na 9:59 mgbede
Echere m na ọ ka mma ma dị ogologo oge ịghara ime mgbasa ozi Super Bowl wee mefuo ego ahụ ebe ọzọ. Mt. Dew enweelarị onye ọrụ mepụtara mmemme vidiyo, ha wepụtakwara ụfọdụ ọdịnaya mara mma. Banyere akara ngosi ahụ, Pepsi na-emecha na-anwa ịbata n'ime nke ha kama ịkụpụ font Coke. M na-eche onye butere Logo mbụ n'agbanyeghị, Pepsi ma ọ bụ otu mkpọsa Obama. The logo n'onwe ya adịghị ka ọ na-anọchi anya ihe ọ bụla.